रोमानियामा महिला पुरुष हरुलाई रोजगारको अवसर ! मासिक तलव कति ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
रोमानियाले विदेशीहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ। एक प्रसिद्ध सुरक्षा कम्पनी द्वारा रिक्त पदहरू विज्ञापन गर्दै छन्। Mecler र Mecler SRL, एक प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा आधिकारिक रोजगार रिक्ति घोषणा गरिएको छ। कम्पनीले यो पदका लागि ९८ जना पुरुष/महिला कामदार खोजिरहेको छ । यस कम्पनीमा केही वर्षअघिदेखि नेपाली कामदारका साथै अन्य देशका कर्मचारीले काम गर्न थालेका थिए ।
सबै कर्मचारीहरू यस कम्पनीमा काम गर्न पाउँदा खुसी छन् किनभने यो र यसका नेताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खजानाको रूपमा व्यवहार गर्छन् र उनीहरूलाई राम्रो निर्देशन दिन्छन्। उल्लेखित सबै कामहरूलाई कम्पनीले उचित तलब प्रदान गर्नेछ। नियमित काम गर्ने घण्टाको अतिरिक्त, ओभरटाइम घण्टा पनि कम्पनीको नीति र नियमहरू अनुसार उपलब्ध छ।
एक सामान्य कर्मचारीले हप्ताको छ दिनको लागि दिनको 8 घण्टा काम गर्दछ। त्यहाँ वार्षिक बिदा पनि छ जुन कम्पनीको नियम र नियमहरूको आधारमा दिइनेछ। कम्पनीले बस्ने र खानाको सुविधा दिनेछ । कर्मचारीले ती खर्चहरू तिर्न आवश्यक पर्दैन। यो काममा २ वर्षको सम्झौता छ। त्यसपछि उनीहरूले चाहेमा थप वर्षको लागि अनुरोध गर्न सक्छन्।